Shina orinasa mpamokatra vy avo lenta | Honghua
Tranon'i Guangdong GoTone (adiresy vaovao) Amin'ny firafitry ny rafitra henjana, ny hazo sy ny tsanganana dia aorina am-pahamendrehana hanoherana ireo fotoana apetraka noho ny enta-mavesatra. Ny hamafin'ny sisin'ny fefy henjana dia miankina amin'ny hamafin'ny tsanganana, ny fehikibo ary ny fifandraisana ao anaty fiaramanidina
Ny tranobe Guangdong Gotone (adiresy vaovao) dia miorina eo afovoan'i Zhujiang New Town, Guangzhou. Sehatra fandraharahana vaovao ho an'ny Orinasa China Mobile (Guangdong) izy io.
Sehatra fananganana: Guangdong Mobile Communication Co., Ltd.
Ivon-toerana famolavolana: Institute of Design Architectural and Research;
Toerana: HuaxiaRoad, Zhujiang New Town, Distrikan'i Tianhe, Tanànan'i Guangzhou;
Datin'ny fanokafana sy fahavitan'ny fifanarahana: 23 aprily 2006 - 23 aprily 2009
Karazana fananganana: fanetezana boaty
Faritra fananganana: 121,547 metatra toradroa
Isan'ny gorodona: 37 ambonin'ny tany, 3 ambanin'ny tany
Haavon'ny trano: 165.2 m
Ny tilikambo Global vaovao dia mijoro eo akaikin'ny Huaxia Road ao amin'ny faritry ny Zhujiang New Town, Guangzhou. Io no tranon'ny birao maoderina izay noforonin'ny tilikambo sy tranobe fanaovana zipo.
Ny Tower Gotone vaovao dia ampiasain'ny orinasam-panjakana (tsy fananganana) fanta-daza ao amin'ny Tanàna Vaovao Zhujiang. Izy io dia napetraka ho iray amin'ireo tranobe manamarika ao Guangzhou sy Zhujiang New Town. Ny tranobe Gotone dia misy rihana 3 any ambanin'ny tany, rihana 37 ambonin'ny tany, izay ahitana faritra anaovana asa, toa ny fitantanana ny birao, ny famokarana fifandraisana, ny efitrano fampirantiana, ny kianja fanatanjahan-tena ary ny tokontany afovoany. Manamboatra velaran-tany 16.640 metatra toradroa ny velaran'ny tany fananganana. Izy io dia foiben'ny China Mobile any amin'ny faritanin'i Guangdong ary ivon-toeran'ny komity mpanohana ny fifandraisana amin'ny Lalao Aziatika Guangzhou 2010.
Mba hanarahana ny kilasy faran'izay avo an'ny biraon'ny birao avoakany dia mampiasa fitaovana avo lenta ny ao anatiny. Ireto tranobe ireto dia takiana amin'ny toerana avo mifandraika, indrindra amin'ny rafitra fanaraha-maso afovoany manerantany, dia tsy maintsy rafitra matanjaka sy miorina, noho izany, Globa lBuilding vaovao no nifidy ny Crestron Central Control System. Amin'izao fotoana izao dia ny ambaratonga avo indrindra, ny haitao matotra indrindra, ny tena asa feno, ny be mpampiasa indrindra, dia ny mahatsapa ny rafitry ny birao fanaraha-maso afovoany sy ny fitantanana manan-tsaina ny fitaovana elektronika isan-karazany sy ny fanodikodinan'ny olombelona.
Amin'ny maha-mpanohana ny serasera sy ivon-kaomandin'ny lalao Aziatika 2010, ny Global Tower dia miaro ny fomba fiasa miorina amin'ny karbaona sy ny tontolo iainana ary mampihatra teknolojia vaovao, fitaovana vaovao ary haitao vaovao amin'ny antsipirian'ny tranobe. Ny tranobe dia manana andiam-pandaminana feno, ary mampiditra fiarovana ara-tontolo iainana, mahaolona, ​​manan-tsaina, mamonjy angovo ary fiarovana ny tontolo iainana.
Rafitra firafitra miorina mafy
Ao amin'ny firafitry ny rafitra henjana, ny hazo sy ny tsanganana dia aorina amin'ny fomba tokana mba hahatohitra ny fotoana apetraka noho ny enta-mavesatra.
Ny hamafin'ny sisin'ny fefy henjana dia miankina amin'ny hamafin'ny tsanganana, ny fehikibo ary ny fifandraisana ao anaty fiaramanidina
Izy io dia mety amin'ny tranobe vita amin'ny beton.
Mety ampiasaina amin'ny fananganana vy ihany koa izy io, nefa ho lafo ny fifandraisana.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny frame henjana dia ny mety hisian'ny drafitra sy ny fampidirana am-baravarankely noho ny fandaminana mahitsizoro misokatra.
Ireo mpikambana ao amin'ny rafitry ny rafitra henjana dia mahazaka fotoana fohy, herin'ny herisetra ary ny enta-mavesatra.
Trano 20 ka hatramin'ny 25 no azo amboarina amin'ny alàlan'ny rafitra rafitra henjana.
Ny tombony amin'ny rafitra henjana dia misy ny fanamorana ny fanamboarana, ny asa dia afaka mianatra ny fahaiza-manao amin'ny fanorenan-trano mora foana, manangana haingana ary azo volavolaina ara-toekarena.
Ny halavan'ny andry farany ambany dia 12.2m ary ny tara-pahazavana lehibe kokoa dia hiharan'ny fiviliana.
Ny fatiantoka iray dia ny fanoherana ny lanjan-tena manohitra ny fihetsika avy amin'ny zana-kazo henjana.
Farany, Burj Al Khalifa izay rafitra avo indrindra eto an-tany dia namboarina tamin'ny alàlan'ny rafitra rafitra henjana.
Previous: Rafitra vy vita amin'ny gara mialoha
Manaraka: Trano fivarotana vy avo lenta